I-Donna Summer Iingoma zee-80s
Umculo 80s Ifuna
I-70s yaseR & B yase-R & B isithandwa kakhulu esithandwa ngumculi u-Donna Summer wayenomdla omhle kwii-80s eziye zamnceda njengento engaphezulu kwe-disco diva ngokungangabazeki waba ngongoma welo hlobo lwe-'70s '. Ukukhonza okungenani umqambi we-co-composer ezininzi zeengoma ezibethekileyo, ihlobo lihlala liqhuba inotshi okanye ezimbini ngaphezu kweenkwenkwezi ezininzi zezintombi, kunye nesimo sakhe njengengcamango ephathekayo ngaphakathi kwesizukulwana sakhe se-albhamu kuphela. Nantsi ukujonga kwexesha elifanelekileyo kwiingoma eziphambili kwi-Summer ngexesha lama-80s, abaninzi babo bebetha ngokukhawuleza njengeyona nto ayithandayo kakhulu.
I-Harry Langdon / i-Archive Images / Getty Izithombe
Ukulandela i-hit ye-hit ye-BP Bad Girls , eyayilawula i-charts Billboard ngowe-1979, ihlobo lagqiba ukukhulula ukuhlanganiswa kabili kwe-albhamu, kwi-Radio: i-Greatest Hits Volumes I & II . Ingoma yomxholo yayiyingoma entsha, ebhaliwe yihlobo kunye nomxhasi omdala waseGiorgio Moroder kwaye ekuqaleni wayehlose ukuvakala kwengqungquthela ye-teenage ye- Foxes , yokuqala ye-Adrian Lyne ejongene noJodie Foster kunye no-former Runaways owayengumculi uCherie Currie. Umzila waba yi-Top 10 yaseMntla yaseMerika kwiintlobo ezininzi kwaye isukuma kunye nekhwalithi yexesha elidlulileyo. Amazwi omdlalo wehlobo aphefumlelwe ekuhambiseni isandi sakhe sothando. I-chorus isebenza njengelona lilungelo lokugqibela.
Isikhuselo Esingaqhelekanga Imbeko yeGeffen / Warner Bros.
Ihlobo laluvuyela i-No. 1 ep hits ngethuba lokuphumla kwakhe ngo-1978 no-1979, kwaye nangona ukutshintshwa kwakhe kude ne-disco njengoko i-'80s yaqala ayiyi kumnceda omnye umpopu ophezulu, umculi wahlala engumngcipheko weengongoma kule minyaka elishumi elitsha. Le ngoma yomxholo ukususela ngohlobo lwe-1980 i-albhamu yokuqala yokukhululwa kweGeffen Records yenyuka yonke indlela eya ku-No. 3, isicatshulwa sokugqibela sasehlobo sifike kuphela emva komsebenzi wakhe omde. Nangona kungabikho ngokupheleleyo ukungafumaneki kwisitayela, ishyhym okanye umveliso, le ngoma ibeka ingqalelo kakhulu kwiinkampani zokwenza izinto kunye neebhobhodi. Okona kubaluleke ngakumbi, ibonakalisa izandi zokunyamekela kwexesha leHlabathi kunye nomnye umphefumlo wakhe ogqwesileyo oculayo ngexesha elide. Kamva, ama-rock guitars ayamnika amandla 'imizamo ye-80, kodwa ngoku i-synth iphelele.
Isikhuselo Esingaqhelekanga Imbeko yeGeffen
Ukuthetha ngombala wegita elisemthethweni, i-Summer slides ngokuzenzekelayo kwilo mzila kule mzila, i-pop ethobekileyo yatshatyalaliswa ngasekupheleni kowe-1980 ngokwenene yamkela ukutyunjwa kwe-Grammy yeNtsebenziswano yokuSebenza kweRecal Rock. Ukutshintshwa kwesitawu kunokumothusa abanye abalandeli bexesha lexesha elide lasehlobo, kodwa banikezelwa ngerekhodi lomculi we-versatility kunye nesimo sawo soqobo njengowesifazane edwaleni, umphumo uyaqiniseka kwaye uyonwaba. Nangona iHlabathi yayingenayo isandla ebhaliweyo lo, ukukhethwa kwakhe njengomtoliki kukhanya kwakhona. Iigitala zokugubha kunye neendleko zokutshisa zikhona apha, kodwa i-Summer voice voice function njengesixhobo esinamandla esingaze sithandabuze ukuba ngubani obiza izihlunu. Eziqinileyo, ezantsi ngaphantsi kwama-80s.
"Ubani Ocinga Ukuba Uyi-Foolin"?
I-Album Cover Cover Image ye-Geffen
Uhlobo luqhubeka luye lwaba lukhuni luya ku-pop / idwala kule mzila evela kwi -Wanderer , eye yanyula i-Top 40 ngo-1981. Njengaloo owandulela phambili, le ntsimbi ibonisa ukuhlukana okungaqhelekanga kwihlobo lokungabonakali nantoni kwi-charts ye-Billboard ye-R & B. Oku akuzange kwenzeke ngengozi, njengokuba ingoma ingabonakali kwexesha laseYesini elidlulileyo njengomgcini wecala lomculo we-pop. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba kukungcatshiswa kwesandi sehlobo; Enyanisweni, njengomntu omnye lo mzila uqinisekisa kwakhona umculi njengomnye wabahlabeleli abacocekileyo. Iibhloko zebhodi zilawula kwakhona, kodwa i-Moroder ingaphezu kwesiphiwo sobunjineli lolu hlobo lwesandi, kwaye ngenxa yoko ingoma enokuziva iqhelekileyo evela kwesinye isicacisi ivakalelwa yinto engapheliyo kunye neyokudala. Kaninzi "
Uthando lulawulwa (iMinwe kwi-Trigger) "
Ngo-1982 u-LP ozibiza ngokuba yi-LP, ihlobo lixhaswe ngumvelisi we-quincy Jones, kwaye umphumo wabavuselela ukutshintsha kwakhe umsindo. I-track- funk- ekhethiweyo, epheleleyo ngekhefu zomculo, i- saxophones kunye nokuninzi kokungabikho ukungqamana komdaniso wokudansa, kubonakalisa ukuchaneka kwamazwi ehlobo ekwahlukileyo, kwindlela enye eyahlukileyo. I-Co-ebhalwe nguJones noRod Temperton, le ngoma ine- Thriller -era Michael Jackson ebhaliweyo kulo lonke, kwaye kanti ihlobo likwazi ukugqithisa loo mpembelelo ukuba iphumelele eyona nto. Oku kukhangela kakhulu ukuba ucinga ukuba i-ileyile yakhe entsha uGeffen yayisisigxina i-albhamu yokugqibela yokurekhoda i-Rainbow , engayi kubona ukukhanya komhla de 1996.
Imbuyiselo yehlobo ephumeleleyo kwi-style eshukumisayo yokutshisa i-Quiet Storm ballad. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba wayephumelele ngokupheleleyo kwisandi sokufumana ukuba ufezekisile ngexesha lokugqibela kwee-70s, lisebenza kwinqanaba elihlukile, elona lwanamhlanje kunamacandelo afana ne "Dance Dance". Njengomnye kumatshati e-pop kunye nee-R & B, le mzila ayizange ifakwe kwi-Top 40 kakhulu, okumele ukuba yayiyadumala into eyayiyinikwe uxhumano lwe-Quincy Jones. Sekunjalo, kubonisa ukusebenza kwamandla okusukela kwihlobo elixuba ukuxuba i-whispery, isitayela se-coaxing kunye nomsebenzi ovelisayo wokubhobhoza kwayo. Kaninzi "
"Usebenza Kanzima Imali"
I-Cover Cover Umfanekiso Ulungelo lweSiqendu Def Jam
Nangona i-rollicking, i-pro-feminist surge of this track ibonwa njengeqondo lokubuya kwehlobo ngo-1983, umculi wayenayo ndawo engekho kufuphi neminyaka embalwa edlulileyo. Nangona kunjalo, ukusebenza kwetshathi yomhlaba wonke yale ngoma ngokuqinisekileyo kwakumele kufakwe enye yexesha lokugqibela lokutshatyalaliswa kweengqungquthela kunye neempumelelo ezinkulu zetshathi ngexesha lokusebenza kwakhe. Ubambisene nomhlanganisi omtsha uMichael Omartian, umculo ubhiyozela umendo onzima kodwa oqhayisa umfazi wesimanje, into ebeyayifumana ngayo ihlobo ngokuqhelekileyo njengomculi wecandelo oqhuba amaqondo ahlukeneyo ekulawuleni inkqubela yomsebenzi wakhe.
"Eli xesha Ndiyazi ukuba Liyinyani"
Isikhuselo Esingaqhelekanga Imbeko yeAlantic / Warner Bros.
Naphezu kwebhodi yebhodibhodi kunye nesandi somshoni, le mzila yafakazela kanye kunye nayo yonke ihlobo ikwazi ukugqithisa ama-eras kunye neendlela kunye nokuphuma ngokupheleleyo ngokupheleleyo. Kuthathwe kwi-albhamu yakhe yokuqala yeWarner Bros, enye indawo kunye nexesha , eyakhutshwa kwaye ikhulelwe ngokuyinxalenye yecandelo lokubhala ingoma, le ntsimbi ingafaka iilwimi ezicacileyo kunye nobuntu kwisiboniso esihle. I-Top 10 yayo ibonisa, ngokugqithiseleyo kwiitshathi zeBillboard's pop, isebenza njengengoma efanelekileyo nefanelekileyo ye-swan yeengxenye eziqhelekileyo kunye nezorhwebo lomsebenzi wakhe. Sekunjalo, ihlobo liye lisaba ngumdaniso obaluleke kakhulu womculo / umculi weqela kumashumi amabini anesibini edlulileyo, ngokukodwa kuboniswe ngabafundi bakhe abasixhenxe.
Iingoma ezigqwesileyo zama-80s
Phezulu .38 Iingoma ezikhethekileyo zee-80s
Iipopayi eziphezulu kunye neengoma ezivela kwi-1984
I-80s Iingoma ezivela kwiCanada Mainstream Rock Solo yoMculi uCorey Hart
I mpazamo ye Sampuli
Ulwaphulo-mali (igrama kunye nokubizwa)
Isikhokelo soMculi sokuhleka kwiSiteji
Amabhunga angamaKristu ajikelezayo
Ngaba Ukusebenza Kwimivo Yomsebenzi?
I-1990s kunye neNgaphezulu
I-Sri Aurobindo (1872 - 1950)
Izikhawulezi ezikhawulezayo ze-15 eziPhezulu zokuPhutha
Ixesha leMculo u-Allegro kunye neNkcazo yalo enobomi
I-Double Your Muscle izuze ngeCandelo loLwakhiwo lweZakhiwo, iNxalenye 1
Ngaphambi kokuba Uthenge i-Car Car
Ngubani owayengumNgcwele uSt Bartholomew, umpostile?